चितवनमा कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश प्रदेश ३ चितवनमा कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–७ का ५५ वर्षीय कोरोना सङ्क्रमित एक पुरुषको भरतपुर अस्पतालमा आज मृत्यु भएको छ । मिर्गौलाको समस्या भई डायलासिस गरिरहेको अवस्थामा असोज ४ गते उनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या भई असोज ७ गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई असोज ८ गतेदेखि कोभिड सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार थालिएको थियो । उनको उपचारकै क्रममा आज दिउँसो १ः२० बजे मृत्यु भएको हो ।
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधानअनुसार १३ केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा विभिन्न केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनयन गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले आज पार्टीका...
Breaking News Roshan Shrestha - August 22, 2020 0
सरकार असफल भए विदेशी हस्तक्षेप र प्रतिगमनमा खतरा हुन्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
प्रमुख Sushila Bishwokarma - March 7, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउनु अहिलेको केन्द्रीय कार्यभार भएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल, उपत्यका...
अर्थ Kumar Raut - April 2, 2020 0
काठमाडौं । विश्वव्यापी फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन सरकारले सातादेखि गरेको लकडाउन अवधिमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा भने दैनिक ५ सय...
Breaking News Kumar Raut - May 27, 2020 0